Hello Nepal News » लेवान्डोस्कीले बोके चोट : च्याम्पियन्स लिगमा पिएसजीविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
लेवान्डोस्कीले बोके चोट : च्याम्पियन्स लिगमा पिएसजीविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख तथा पोल्यान्डका स्टार फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्की घाइते भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीमा रहेका बेला उनले चोट बोकेका हुन् । फिफा विश्वकप फुटबलअन्तर्गत दोस्रो छनौट खेलमा गत राति पोल्यान्ड र आन्डोराको खेल दौरान उनी घाइते भएका हुन् । आफ्नो घरमा पोल्यान्डले आन्डोरामाथि ३–० को जित निकाल्दा लेवान्डोस्कीले २ गोल गरेका थिए । सो खेलपछि चेकजाँच गर्दा उनी चोटिल भएको खुलेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार लेवान्डोस्कीका समस्या लिगामेन्ट इन्जुरी हो । उनको दायाँ घुँडामा समस्या देखिएको छ । यस्तो केसमा सामान्यत खेलाडीलाई रिकभर भएर मैदान फर्किन १०–१५ दिनसम्म लाग्न सक्छ । यसको अर्थ लेवान्डोस्की पोल्यान्डले आगामी खेल इंग्ल्यान्डसँग खेल्दा टोलीमा हुनेछैनन् । रिपोर्टअनुसार लेवान्डोस्की राष्ट्रिय टोली छाडेर क्लब बार्यन फर्किनेक्रममा छन् । चोट बोकेको पुष्टि भएपछि उनले राष्ट्रिय टोली छाडेका हुन् । उनको उपचार बार्यनमै हुनेछ ।
चोट बोकेसँगै लेवान्डोकीले अप्रिल ७ तारिखमा युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीविरुद्ध हुने पहिलो लेगको खेल गुमाउने पक्का भएको छ । उनलाई चोटमुक्त हुन कम्तीमा १० दिनसम्म लाग्ने भएकाले सो खेलमा लेवान्डोस्की नहुने करिब पक्काजस्तै भएको हो । सो खेल अबको ९ दिनपछि हुनेछ । यदि सो खेलमा लेवान्डोस्की उपलब्ध नभएको अवस्थामा पिएसजीलाई उनीबिनाको बार्यन धेरै नै सजिलो हुनेछ । सम्भवतः लेवान्डोस्कीबिना बार्यनको सामना गर्नु पिएसजीका लागि एक अवसर हुन सक्नेछ ।
जारी सिजन लेवान्डोस्कीले बार्यनका लागि सबैखाले प्रतियोगितामा कूल ३६ खेलबाट ४२ गोल गरिसकेका छन् । जसमा उनले बुन्डेसलिगामा २५ खेलबाट ३५ गोल गरेका छन् । यता, पोल्यान्डका लागि विश्वकप छनौटमा २ खेलबाट ३ गोल गरेका छन् । जारी सिजन उनी सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । च्याम्पियन्स लिगमा पिएसजीसँग खेल्नुअघि बुन्डेसलिगामा बार्यनले एक खेल खेल्नेछ । लेवान्डोस्कीले चोटका कारण कम्तीमा दुई खेल गुमाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति १६ चैत्र २०७७, सोमबार १०:५०